Sọpụrụ 30, Sọpụrụ 30 Pro na sọpụrụ 30 Pro + bụ ndị ọrụ gọọmentị: Kirin 985/990 na kamera na-egbuke egbuke | Gam akporosis
Taa abụrụla ụbọchị ahọpụtara site na Honor iji weta ekwentị ọhụrụ atọ elere anya dị ka igwe na etiti na njedebe dị elu, nke ikpeazụ bụ nke abụọ. Honor egosipụtawo ọhụrụ Honor 30, Sọpụrụ 30 Pro na Sọpụrụ 30 Pro +, ngwaọrụ atọ nwere ike ịsọ mpi na ekwentị ndị ọzọ ka ndị nrụpụta ekwentị ndị ọzọ wepụtara.
Honor na-ekwuwapụta ha mgbe ha chechara izu ole na ole gara aga Sọpụrụ 30S, nke Sọpụrụ Sọpụrụnụ 9A na nso nso a Sọpụrụ Play 4T na Play 4T Pro. Mbinye aka Asia na ụdị Honor 30 na-akwado isi nke Honor 20, otu atụmatụ ya nke ga-esochi bụ oghere nwere oghere na ihuenyo ahụ.
1 Ihe niile gbasara Sọpụrụ 30
1.1 Igwefoto anọ maka Honor 30
1.2 Nnweta na ọnụahịa
2 Ihe niile gbasara Sọpụrụ 30 Pro na 30 Pro +
2.1 Igwefoto dị elu maka 30 Pro na 30 Pro +
2.2 Nnweta na ọnụahịa nke Honor 30 Pro na Pro +
Ihe niile gbasara Sọpụrụ 30
Ọ bụ njedebe nke atọ ahụ arụ ọrụ, mana ọ na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma na nnwere onwe dị ukwuu, mana ọ bụghị naanị ubi nke ọ pụtara. The Honor 30 nwere nnukwu ihuenyo OLED 6,53 inch nke nwere mkpebi FullHD +, n'aka ekpe ị nwere ike ịhụ oghere mkpuchi nke ọ na-etinye igwefoto selfie 32-megapixel na AIS. A na-agbakwunye akara mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo.
Dị ka ihe ọhụrụ, Na-asọpụrụ 30 si na Honor 30 Pro na Honor 30 Pro + pụta site na itinye ihe ọhụrụ Kirin 985 mgbawa, a dị iche iche nke 980 nwere ntakịrị mmụba na ọsọ, ọ bụ ezie na ọ dara ntakịrị n'okpuru Kirin 990. Ihe nlereanya a nwere RAM abụọ na nhọrọ nchekwa: 6/8 GB na 128/256 GB na batrị 4.000 mAh na 40W ngwa ngwa .
Igwefoto anọ maka Honor 30
N'agbanyeghị na a na-ahụta ya dịkarịa ala n'ime atọ ahụ, ọ na-agbakwunye ngụkọta nke ihe mmetụta anọ, nke bụ isi bụ 40 MP nke 1/17 sentimita asatọ na oghere oghere nke f / 1.8, nke abụọ bụ obosara sara mbara nke 8 MP, nke atọ ihe mmetụta telephoto 8 MP na nke anọ a 2 MP nnukwu.
Sub-ika nke Huawei jụkwara iji ọrụ GoogleYa mere, ọ gaghị enwe Storelọ Ahịa Play iji zọọ na ọrụ Huawei nke anyị ga-enwe ụlọ ahịa AppGallery na ngwa ndị arụnyere na mbụ site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na gam akporo 10 na Magic UI 3.1.1 omenala oyi akwa. Na ngalaba njikọta, ọ bịara na njikọ 5G, Wi-Fi 6+, Bluetooth 5.1, NFC na USB-C.
IKIRU 6.53-inch OLED nwere mkpebi FullHD +
Nhazi Kirin 985 isi asatọ
Ohere TERLỌ N'IME 128 / 256 GB
Ndị isi 40MP IMX600 (1 / 1.7 ") - 8MP obosara akụkụ f / 2.4 - 8 MP telephoto - 2 MP macro - Ihu: 32 MP f / 2.0 AIS
UMUAKA 4.000 mAh na 40W ngwa ngwa
OS Gam akporo 10 na Ime Anwansi UI 3.1.1 - O nwere HMS (Huawei Mobile Services)
Njikọ 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1- NFC - USB-C
El Sọpụrụ 30 rutere China na mbụ na agba iseBlack, green, acha anụnụ anụnụ, odo odo na ọlaọcha, ekwenyeghi mwepụta ahụ na mpaghara ndị ọzọ n'oge a. Na mmepụta ya, a ga - enwe ụdị atọ, 6/128 GB maka yuan 2.999 (euro 389 na mgbanwe ahụ), 8/128 GB maka yuan 3.199 (euro 415 na mgbanwe ahụ) yana 8/256 GB maka 3.499 yuan (euro euro 454) na mgbanwe).
Ihe niile gbasara Sọpụrụ 30 Pro na 30 Pro +
Nhazi nke ha abuo na-adighi nma nke Honor P40 Pro +, mana o putara nke gunyere Honor logo na azu. Ihe Sọpụrụ 30 Pro na sọpụrụ 30 Pro + agbakwunyere ogwe 6,57-inch na nke ọ bụla, OLED na FullHD +, na ụdị Pro + ụdị ume ọhụrụ ahụ ruru 90 Hz. N'ihu ị ga-ahụ ese foto abụọ, otu n'ime 32 MP na onye ọzọ nke 8 MP. Ihe mkpisiaka na-agụ dị n'okpuru ihuenyo.
Ekwentị abụọ ahụ kpebiri ịmaba ma wụnye ya Kirin 990 asatọ isiEwezuga inye njikọ 5G, ọ na-enyekwa WiFi 6 +. Ihe nlereanya Na-asọpụrụ 30 Pro Ọ na-abịa na otu nhọrọ nke 8 GB nke Ram na 128/256 GB nke nchekwa, na Sọpụrụ 30 Pro + nwere nhọrọ abụọ nchekwa RAM site na 8 ruo 12 GB na 256 GB nke nchekwa. 30 Pro na-ejigide batrị 4.000 mAh nke Honor 30 na 40W ngwa ngwa na 30 Pro + nwere otu mAh (4.000) na 40W ngwa ngwa na mgbakwunye na ikuku na nkwụghachi ụgwọ.
Igwefoto dị elu maka 30 Pro na 30 Pro +
El Honor 30 Pro nwere ese foto azụ atọ, nke kachasị bụ ihe mmetụta 50pipixel, ihe mmetụta telephoto 8 megapixel nwere ihe mmụba dị 125 mm na 16 megapixel wide-angle sensor. Honor 30 Pro + nwere otu ihe mmetụta ahụ ma na-agbakwunye ọrụ macro iji pụta karịa 30 Pro.
Otu ihe ahụ na-emekwa ọzọ Sọpụrụ 30, Sọpụrụ 30 Pro na Sọpụrụ 30 Pro + Ha enweghị ọrụ Google, yabụ anyị ga-eji Huawei Mobile Services mgbe ọ bịarutere gam akporo 10 na Magic UI 3.1.1. Njikọta dị ka ụdị isi, 5G SA / NSA, Wi-Fi 6+, Bluetooth 5.1, NFC, na USB-C.
Na-asọpụrụ 30 Pro
IKIRU 6.57 "OLED nwere mkpebi FullHD +
Nhazi Kirin 990 isi asatọ (2x Cortex-A76 na 2.86 GHz + 2x Cortex-A76 na 2.36 GHz + 4x Cortex-A55 na 1.95 GHz)
Ndị isi Azụ: 40MP IMX600 (1 / 1.7 ") - 16MP obosara (1 / 3.09") 17mm f / 2.2 - 8MP 5x telephoto
CAMERA N'IHU 32 MP f / 2.0 AIS - 8MP f / 2.2 105º
Njikọ 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1 - NFC - USB-C
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo na stereo ọkà okwu
Sọpụrụ 30 Pro +
IKIRU 6.57 "OLED nwere mkpebi FullHD + na ọnụọgụ ume 90 Hz
Ndị isi Azụ: 50MP IMX700 (1 / 1.28 "- 2.44µm) f / 1.9 - 8 MP lens telephoto 5x f / 3.4 - 16MP wide wide (1 / 3.09") 17mm f / 2.2 and a macro sensor
UMUAKA 4.000 mAh na 40W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa - 27W ikuku na-enweghị atụ
Nnweta na ọnụahịa nke Honor 30 Pro na Pro +
El Sọpụrụ 30 Pro na Sọpụrụ 30 Pro + ga-ere na China wee hụ ma otu n’ime ụdị atọ a ga - erute kọntinent ndị ọzọ. Ha nwere agba ise dịnụ: akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọlaọcha, acha anụnụ anụnụ, ojii na odo. Ọnụahịa nke Honor 30 Pro na ụdị abụọ ya nke 8/128 GB bụ 3.999 yuan (518 euro na mgbanwe ahụ) na 4.399 yuan (570 euro na mgbanwe ahụ), Honor 30 Pro + bịara na nsụgharị abụọ: 8/256 GB maka yuan 4.999 (648 euro na mgbanwe ahụ) na 12/256 GB maka (euro 713 na mgbanwe ahụ).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sọpụrụ 30, Sọpụrụ 30 Pro na sọpụrụ 30 Pro + bụ ndị gọọmentị: Kirin 985/990 na igwe foto mara mma